45% Kubviswa kweiyo Vero Email Automation Kunyorera
Vero iemail kushambadzira otomatiki sevhisi iyo yakanangana nekuwedzera mushanduki shanduko uye chengetedzo. Uchishandisa zvakanangwa maemail unogona kugadzira yakawedzera mari uye kugadzirisa kugutsikana kwevatengi.
Martech Zone vaverengi vanogona kuwana 45% kubva pamwedzi mitanhatu kunyorera chirongwa cheVero Chidiki nekushandisa yedu yakabatana link!
Vero Email Kushambadzira Kunosanganisira
Mumwe nemumwe mutengi profiles - Teedzera data nezve ako vatengi mune yako yekunyoresa dhatabhesi. Shandisa iyo data yaunotora senge mazita evatengi vako, nzvimbo, uye mazera kupatsanura dhatabhesi rako uye kutumira akawanda anotarirwa maemail. Nekufamba kwenguva Vero anoteedzera otomatiki zviito zvevatengi zvega pawebhusaiti yako kusanganisira iwo mapeji avanoshanyira, mafomu avanotumira uye mabhatani avanodzvanya. Wona chero chimiro chemutengi chero nguva, kusanganisira yakazara nhoroondo yeemail yawakatumira uye nezviito zvavo mushure mekuvatambira.
Tsamba Dzesimba - gadzira zvine simba, chaiwo-nguva zvikamu zvinoenderana nezvakaitwa nevatengi (Semuenzaniso: Yakashanyira mitengo peji kanokwana kana munguva yakapfuura) kana zvivakwa zvavo (Muenzaniso: kuEurope). Tumira tsamba dzetsamba kune yako ese mutengi-base kana kudhira pasi uchishandisa zvikamu zvawakagadzira kutumira iro chairo meseji kune vatengi chaivo. (Semuenzaniso: yakanyoreswa yemahara muedzo asi haina kubhadhara).
Mhinduro yeA / B - Kuyedza kunoita kuti iwe uone kuti ndeipi mitsara yenyaya, kubva kukero, muviri kopi kana matemplate ayo vatengi vako ane hukama kune akanakisa - achikupa iwe yakawanda mukana wemari. A / B kuyedza yako otomatiki uye enhau etsambadziro zviri nyore naVero. Ingo wedzera misiyano kune chero mushandirapamwe wawakagadzira uye tsanangura kupatsanurwa muzana uye Vero anozotaura pane ese.
Tags: ab testvatengi profilestsamba dzinesimbaemail kushandisa michinakudzokororaChikamuchinangwaTriggermushandisi-akakonzera maemailchokwadi
Fluid: Dhizaini, Dhizaina uye Govana Yako Nharembozha Prototypes
Zvakajairika theme theme Zvikanganiso neWordPress